‘छक्का पञ्जा २’ को पहिलो गीत रिलिज, हेर्नुस् कस्तो छ ? « Ramailo छ
‘छक्का पञ्जा २’ को पहिलो गीत रिलिज, हेर्नुस् कस्तो छ ?
प्रकाशित मिति : Jul 21, 2017
असोज ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ को पहिलो ‘ए दाजु’ बोलको गीत रिलिज भएको छ । अल्मोडा राना उप्रेतीको संगीत रहेको गीतमा अल्मोडा र सुजता बर्माको स्वर छ । शब्द प्रिन्स र दिपकराज गिरी मिलेर लेखेका छन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोमा जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का र स्वरुप पुरुष ढकाल फिचरिङ छन् । भिडियो हेर्नुस :
दिपाश्री निरौला निर्देशित फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ मा दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की र गीतको भिडियोमा फिचरिङ कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । दिपकराज, दिपाश्री निरौलाको समुहसँग निर्माता विकास राज आचार्यले पनि लगानीमा सहकार्य गरेका छन् । छायाँकन दिर्घ गुरुङको छ ।